Ny teknolojia Advanced Ammonia Refrigeration Conductions dia manampy amin'ny famonjena mihoatra ny 30% ny angovo sy ny rano. Ny Evaporative Cooling dia midika izanyTEMPERATURES ambany fivoarana azo atao. Ny hafanana azo tsapain-tanana sy miafina avy amin'ny vata fampangatsiahana dia alaina avy amin'ny rano famafazana sy ny rivotra entin'ny rivotra.
Next Generation Cooler dia manome ny tombony azo avy amin'ny evaporative & dry cooling amin'ny milina tokana. Ny hafanana azo tsapain-tanana avy amin'ny tsiranoka avo lenta dia azo alaina ao amin'ny faritra maina ary ny hafanana miafina dia azo alaina avy amin'ny faritra mando etsy ambany, ka miteraka rafitra haingam-pandeha sy fitehirizana angovo.
STORAGE ICE THERMAL
Ny fitahirizam-bokatra Ice Thermal (TES) dia teknolojia mitahiry angovo mafana amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny medium fitehirizana ka ny angovo voatahiry dia azo ampiasaina amin'ny fotoana manaraka ho an'ny fampiharana mangatsiaka.
Rafitra fanatanjahantena AIO Miaraka amin'ny Condenser evaporative
SISTEMA AIO REFRIGERATION miaraka amin'ny CONDENSER EVAPORATIVE
Skid Mounted Complete Packaged Refrigeration System miaraka amin'ny evaporative Condenser dia manampy ny mpanjifa hamonjy ny habaka, angovo ary ny rano fanjifàna mihoatra ny 30%. Fampidinana amnôlôjia ambany ambany Rafitra misy andraikitra tokana, manampy. Ny hafanana azo tsapain-tanana sy miafina avy amin'ny vata fampangatsiahana dia alaina avy amin'ny rano famafazana sy ny rivotra entin'ny rivotra
Sambo mpanampy amin'ny refrigeration
Ny sambo fampangatsiahana SPL dia noforonina sy novokarina isaky ny ASME Sec VIII Div. 1. Ny sambo ASME misy tombo-kase dia miantoka ny fahamendrehana tanteraka sy ny faharetan'ny zavamaniry Refrigeration. Tsy manatsara ny fahombiazan'ny angovo amin'ny rafitra fotsiny izy io, fa mampihena ny vidin'ny Operation ihany koa.
Open Type Steel Cooling Tower - Cross Flow
TOA FAMPISANANAN'NY TYPE STEEL misokatra
Ny karazana Open flow tena mahomby amin'ny karazana Open type dia mahavonjy rano mihoatra ny 30% sy ny vidin'ny asa amin'ny karazana mikoriana Open Counter. Fahombiazana avo lenta Ny famindrana hafanana dia mameno sy manafoana ny drift manome fahombiazana azo antoka azo antoka. Ny Compact Shape ary mora ny mametraka ny milina Steel dia miaro ny tontolo iainana manoloana ny olan'ny FRP.
Ny teknolojia Advanced Ammonia Refrigeration Conductions dia manampy amin'ny famonjena mihoatra ny 30% ny angovo sy ny rano. Ny evaporative evaporative dia midika fa azo atao ny mandray TEMPERATURES MAFY. Ny hafanana azo tsapain-tanana sy miafina avy amin'ny vata fampangatsiahana dia alaina avy amin'ny rano famafazana sy ny rivotra entin'ny rivotra.